Thwebula GPU-Z 2.29 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: GPU-Z
GPU-Z – uhlelo ezanele ulwazi mayelana ikhadi computer ihluzo. GPU-Z isekela video amakhadi abakhiqizi ezifana NVIDIA, Intel and ATI. Isofthiwe ikuvumela ukuba bafunde model of ikhadi video, GPU uhlobo, connection interface, izinga lokushisa video ikhadi, isivinini cooler njll GPU-Z inomsebenzi we ukuhlolwa ikhadi ihluzo, okuyinto eyenza ukubuka umthwalo phezu ihluzo amagama. Isofthiwe ine enembile futhi kulula ukuyisebenzisa interface.
Imininingwane eyengeziwe mayelana computer ihluzo ikhadi
Ukusekela amadivaysi ezivela NVIDIA, ATI and Intel Graphics
Ukuhlola ikhadi ihluzo
Amazwana ku GPU-Z
GPU-Z software ehlobene
I-MemTest – into encane yokuhlola ukusebenza kwe-RAM, eqinisekisa ukuthi i-RAM iyakwazi ukuqopha futhi ifunde imininingwane.
Lona omunye wababukeli be-PDF abancinci abasekela imisebenzi ejwayelekile namathuluzi wokuhamba kalula ngamakhasi e-PDF.